Amabhokisi Esipho, Incwajana, Izitika Zomdwebo - Yuxingyuan
Sizimisele ukusebenza naweukwakha ikusasa elingcono.
I-Shenzhen Yuxingyuan Gift Packaging Co., Ltd.yibhizinisi lobungcweti lokuphrinta nokupakisha elihlanganisa ukwakheka, ukuphrinta nokwenziwa kwangemuva kokucutshungulwa. Okukhethekile kokuphrinta zonke izinhlobo zamabhokisi okupakisha, amabhokisi ombala, amabhokisi wamakhadi, amakhadi ombala, ama-albhamu wokukhangisa, amathegi, amabhukwana, izikhwama zamaphepha, izitika, izincwajana, izitika zomdwebo, ama-albhamu ezithombe, amabhokisi ezinto zokuhloba, amabhokisi we-boutique…
Ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme yokuphrinta nokupakisha.
Ama-noodle akhethekile ephepha ane-bowknot pa enhle ...
Ibhokisi lesipho elilula Indima yamabhokisi ezipho Ukubukeka okuhle, okuhlukile okugoqa izinto, i ...
imininingwane eyenziwe ngezifiso, enhle eyenziwe ngokwezifiso ...
Izitika ze-Flower tattoo Izitika ze-tattoo zobuhle zikunikeza ubuhle obuncane empilweni yakho ejwayelekile. ...
Cover iphethini ngokwezifiso sebhithi custo ...
Incwadi yamaphepha entwasahlobo yamaphepha entwasahlobo Khetha iphepha lezincwadi zokubhalela zabafundi: Okokuqala, ikhwalithi yepape ...
ngokwezifiso lesikhumba umbala ngokwezifiso sebhithi busin ...
Le notebook yebhizinisi esezingeni eliphakeme inokubukeka kokugcina okukhulu nokubukeka kokhiye ophansi ngaphandle kokulahlekelwa ...
Le nkampani ihlala ithatha ukuthuthukiswa kwebhizinisi lesimanje eliphrintiwe lobuchwepheshe njengesiqondiso salo sokuthuthuka, lihambisana nezikhathi, futhi lihambisana nolwazi lwamanje lomkhakha wokuphrinta nezitayela.
Sithuthukise imishini yokuphrinta nezinga lobuchwepheshe lobuchwepheshe.
Isitayela somkhiqizo sicebile, ngokuqinisekile singanelisa ukufunwa kwakho.
Uma udinga, sinabachwepheshe abaqeqeshiwe ukuxhumana nawe.
Ngabe abantu abadwetshwe i-tattoo bazokhetha izitika ze-tattoo？
Ngabe abantu ababhalwe ama-tattoo bazokhetha izitika ze-tattoo？ Wonke umuntu ujwayelene negama elithi tattoo, akunjalo? Kulezi zinsuku, emehlweni abantu abaningi, noma ngubani one-tattoo emzimbeni wakhe uzothathwa njengomuntu onenhlalo. Abantu abaningi ...
Uyini umkhombandlela omusha wokuthuthukiswa kwemikhiqizo yokubhala
Uyini umkhombandlela omusha wokuthuthukiswa kwemikhiqizo yokubhala? Eminyakeni edlule, ngokuthuthuka kwezinga lokuphila kwabantu, isidingo sabathengi semikhiqizo yokubhala sikhuphukile, okubuye kwenze nabaphakeli bezinto zokubhala ukuthi ...
Khonza wonke amakhasimende ngokucophelela.
Kusukela yasungulwa, inkampani ibilokhu inamathela kwifilosofi yebhizinisi "yokwenza izinto ezintsha, ukusebenza kahle, ikhwalithi, insizakalo".
Ikheli: INanlian Industrial Village, Umphakathi waseNanlian, iLonggang Street, isifunda saseLonggang, iShenzhen, iGuangdong, China